XOG RASMI AH: Madaxtooyada Soomaaliya & M/weynaha Koonfur Galbeed oo dagaalamaya iyo xogo ay heshay Puntlandtimes.com – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Madaxtooyada Soomaaliya & M/weynaha Koonfur Galbeed oo dagaalamaya iyo xogo ay heshay Puntlandtimes.com
MUQDISHO(P-TIMES)- Si adag ayey Madaxtooyada Soomaaliya & Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iskugu hayaan arrimaha ku saabsan doorashada Gudoomiyaha Aqalka baarlamaanka Faderaalka ee dhici doonta Isniinta nagu soo aadan, waxaana la dooran doonaa qof ka soo jeeda Beelaha Digil & Mirifle.
Si aan ka leexasho laheyn ayay dhinacyadu u muujinayaan dagaalkooda, waxaana qolo kasta ay ciyaaraysaa doorkeeda ku aadan sidii ay ku heli lahayd codadka xildhibaanada baarlamaanka Faderaalka, si daadka loo qaadsiiyo qolada kale.
Shaki ma saarna in baarlamaanka Faderaalku kala jaban yahay, marka laga hadlayo mawqifyada qaarkood, waxaana jira Xildhibaano aad u kala aragti duwanaa xiligii Mooshinka Jawaari oo maanta ciyaaraya siyaasad isku mid ah.
Laakiin welwelka taagan ayaa ah in aysan qolana heysan awood ay maanta si cad banaanka ula soo bixi karto, sidda ay ku waramayan Falanqeeyaasha siyaasadda ee magaalada Muqdisho.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka welwelsan dagaalka Shariif Xasan Sheekh Aadan ku doonayo in uu saameyn ugu yeesho cidda noqonaysa gudoomiyaha baarlamaanka cusub, taas oo uga baqayo kursigiisa Madaxweyne-nimada Koonfur Galbeed.
Shariif Xasan Sh Aadan wuxuu hadda ciyaarayaa talaabo kasta oo afka ciidda ugu dari doono dadaalka Madaxtooyada, isagoo lagu yaqaano nin aan ka nasan arrimaha siyaasadda, si weyn khibrad ugu leh arrimaha dagaalada noocan ah ayaa maalmihii u dambeeyey bilaabay duulaan ay adag tahay in laga hortago.
Ka sokow kulamada uu la qaadanayo xildhibaanada deegaanadiisa ka yimi, haddana wuxuu ciyaarayaa door kale oo uu ku kasbanayo Xildhibaanada dawlad gobaleedyada Puntland, Jubbaland & Galmudug oo uu ka doonayo in uu taageero uga helo damaciisa, waxaana xooga badan ka soo baxayaa sidda ay hadda wax ku socdaan.
Lama saadaalin karro ciyaaraha siyaasadeed ee hadda socda, balse shaki ma saarna in si xun loogu dagaalamayo arrimaha siyaasadda, waxaase dooda xoog badan ay tahay sidda ay wax noqon doonaan 30-ka bishan oo ah maalinta kala baxa doorashada Gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.